Ronaldo oo rikoor kale u dhigay ciyaaraha qarammada kubadda cagta – Gool FM
(Portugal) 13 Okt 2021. Weeraryahanka kooxda Manchester United ee Cristiano Ronaldo ayaa xalay sameeyay rikoor kale oo heerka qarammada ah kaddib markii uu saddexley (Hat-trick) ka dhaliyay xulka qaranka Luxembourg ciyaar uu xulkiisa Portugal ku adkaaday 5-0.
Ronaldo ayaa horraan jebiyay rikoorka gool-dhaliyaha ugu sarreeya heerka qarammada kaddib markii soo qabtay rikoorkii Ali Daei ee 109-ka gool isagoo haatan magaciisa ku xariiqay darajadaas.
Sidoo kale markii uu toddobaadkii hore goolka ka dhaliyay xulka Qatar waxa uu noqday xiddiga xulalka ugu badan gool ka dhaliyay isagoo 46 xul oo kala duwan goolal ka dhaliyay.
Intaas kuma uusan harin e, 36-sano jirka kabtanka u ah Portugal ayaa saddexleydii uu xalay dhaliyay ku noqday ciyaaryahanka saddexleyda ugu badan ka dhaliyay heerka qarammada waxaana uu haatan xulkiisa u dhaliyay xalay saddexleydiisii 10-aad.
Si kastaba ha ahaatee, rikoor sameynta Ronaldo ayaa kusoo beegantay maalmo kaddib markii uu Lionel Messi noqday xiddigii ugu horreeyay ee 80-gool u dhaliyay dal ku yaalla Koonfurta Ameerika.
Macallinka Atletico Madrid ee Diego Simeone oo sheegay inuu isku dayay lasoo saxiixashada Messi kahor inta uusan ku biirin PSG & Suarez oo...